သင့်အနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောဘဝနေထိုင်မှုနေကြတယ်? — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကငါသည်ငါ၏အသစ်စာအုပ်နှင့်အတူခရီးစဉ်အပေါ်သွားလေ၏, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. တစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်အခါ, ငါမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဟောပြောချက်ပေးခဲ့တယ်, "ကကောင်းသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ဘာကိုဆိုလို?” Chattanooga ခုနှစ်တွင်, TN, ကျနော်တို့သတင်းစကားကိုမှတျတမျးတငျထားငါအထက်က posted င်. အောက်တိုဘာလအပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့စာအုပ် 1, 2012 သင်ယ်ယူနိုင်ပါသည် ဒီမှာ. သငျသညျကို click နိုင်ပါတယ်စာအုပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ဒီမှာ. သငျသညျကောငျးဘဝကအယ်လ်ဘမ်ယ်ယူနိုင်ပါသည် ဒီမှာ. သငျသညျအကောငျးဘဝနေထိုင်နေကြ?
Sotrrzz • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသတင်းစကားကိုဒါဖှယျဖြစ်ပါသည်!!! သငျသညျ Lee ကခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်!!! တစ်ဦးအဖြစ် 45 ၏တစ်နှစ်ငယ်ရွယ်မိခင်3သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းကလေးများနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါဖြစ်ကြောင်းလူငယ်များ၏ဥပမာရှာဖွေနေတာတခုတသောင်းရှစ်နှစ်အရွယ် “ကောင်းမွန်သောဘဝအသကျရှငျ” ခရစ်တော်အားဖြင့်!!! ငါသည်ငါ့ကလေးတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဝေမျှပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကချစ်ပြီးငါသည်သင်တို့၏ဂီတချစ်သောကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုကျနာဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်!!!
Tiffany LeRoux • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
CherishJesusLuv • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 5:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါနထေိုငျငါနဲ့သူကကျွန်မကိုအတွင်းသူ၏ကောင်းမွန်သောဘဝထား :) ထိုအခါငါသညျယရှေုခရစ်တော်နှင့်အတူ, ထာဝရအသက်တာ၏ကောငျးမွတျခွငျးအားလုံးဂုဏ်ပြုထိုက်သောသူအား၎င်းတဦးတည်းအတွက်အစဉ်အမြဲကြှနျုပျ၏ရှငျဘုရငျနှငျ့အတူအသကျရှငျဖို့မျှော်လင့်.
ဆာရှာ • သြဂုတ်လ 21, 2013 တွင် 4:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါဗီဒီယိုကောငျးခြီးဖြစ်ပါသည်! ငါကစောင့်ကြည့်ပျော်မွေ့. သူ၏စကားဘုရားသခငျသညျကျေးဇူးတင်ပါသည်! ခရီးစဉ်ကို, ငါသည်သင်တို့ကိုပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကို back up လုပ်ထားဖို့သငျသညျအညီကျမ်းစာလာသည်ပေးသောကိုချစ်ကြ. အလွန်သာယာသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနဲ့ကျွန်မကျိန်းသေသင့်ရဲ့ပြက်လုံးမှာရယ်မောခဲ့သည်. ကြောင်းကြက်သားပူးတွဲအကြောင်းကိုဒီတော့စစ်မှန်တဲ့!!!